isotonic သောက်စရာ - Thermomix ချက်ပြုတ်နည်းများ သာဓက
အဖျော်ယမကာ1 မိနစ်4 ကလူ
မည်သည့်ဆင်ခြေမဆိုအိမ်လုပ် isotonic သောက်ခြင်းဖြင့်အနားယူရန်ကောင်းသည်။ အထူးသဖြင့်တစ် ဦး ပြီးနောက် အားကစား session တစ်ခုသို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှုအပြည့်အဝတစ်ရက်။
ကျွန်မရဲ့ခင်ပွန်းနဲ့သမီးအကြီးကတစ်နာရီစက်ဘီးစီးသွားတဲ့အချိန်တစ်ရက်မှာအထူးမှတ်မိသေးတယ်။ သူတို့ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော့်သမီးကAquarius®ကို ဦး ဆုံးတောင်းပန်ခဲ့တယ်။ ပြီးသွားပါပြီ ငါဒီကိုအောက်မေ့နှင့် ခဏငါကပြင်ဆင်ကြ၏ အနည်းငယ်ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်ရိုးရှင်းသောလမ်းအတွက်။
က Les အရမ်းကြိုက်တယ် ထိုအချိန်မှစ။ ငါရေကူးပြိုင်ပွဲသို့မဟုတ်မရပ်မနားတစ်ရက်အကြာတွင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာကသောက်ပြီးပါပြီ။ ကျနော်တို့ကအိပ်ရာပေါ်မှာ lounging နှင့်အစာစားရန်ကိုချစ် စွမ်းအင်အရက်ဆိုင်…မင်းခွန်အားပြန်ရမယ်။ 😉
1 isotonic သောက်စရာ
peeled နှင့်မြေတပြင်လုံး2မုန်လာဥ
3 အလတ်စား Lemon
ရေ 800 ဂရမ်
ကျွန်ုပ်တို့သည်Thermomix®ကိုစတင်သည်။ မြန်နှုန်း6မှာ။ မုန်လာဥနီများကိုအိုးထဲထည့်ပြီးအပြည့်ထည့်ပြီးလျှင်အသားထဲထည့်ပါ။
အဆိုပါဆေးကြော, unpeeled နှင့် quartered Lemon, သကြားနှင့်ရေထည့်ပါ။ ငါတို့နှိပ်ပါ ခြောက်သွေ့သော hits နှင့်အတူ5သို့မဟုတ်6ကြိမ် Turbo ခလုတ်ကို။
ရေခဲနှင့်အတူအိုးထဲသို့ဒဏ်ငွေကွက် strainer မှတဆင့် strain ။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - သီးနှံအရက်ဆိုင်
ရင်းမြစ် - စာအုပ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ပြသူများ၏ချက်ပြုတ်နည်းများ။
အခြားချက်ပြုတ်နည်းများကိုရှာဖွေပါ။ အချိုရည်နှင့်ဖျော်ရည်, လွယ်ကူပါတယ်, ၁၅ မိနစ်အောက်, ကလေးများအတွက်ချက်ပြုတ်နည်းများ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - သီဟသူရ » Thermomix ချက်ပြုတ်နည်းများ » အချိုရည်နှင့်ဖျော်ရည် » isotonic သောက်စရာ
ဘယ်လောက်ကြွယ်ဝတယ်! ငါအထူးအထူး thermomix အတန်းထဲတွင်ကြိုးစားခဲ့ငါကြိုက်တယ်, ဒါပေမယ့်ငါကဘယ်တော့မှပြင်ဆင်ကြဘူး။ တိကျစွာငါသည်လည်းထိုစာအုပ်ရှိသည်။
Piluka ကအရသာရှိတယ်။ လုပ်ဖို့ဝံ့ အနမ်း
ကလေးငယ်များအတွက်စက်ဘီးစီးရန်လေ့လာသူလာသောအခါကျွန်ုပ်သည်ဤအရသာအလွန်ကောင်းသောအရာကိုသင်ပြင်ဆင်သည်။ သင်သည် speedcuchara.com တွင်တည်ရှိသောစတော်ဘယ်ရီဝက်အေးနေသည်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ စတော်ဘယ်ရီတွေရှိနေပြီဆိုရင်အားသာချက်ရှိတယ်။ နှုတ်ခွန်းဆက်စကား ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, tomells
mari carmen အားပြန်ကြားပါ
မင်္ဂလာပါမာရီကာမဲန်၊ ချမ်းအေးတဲ့ရာသီကိုငါနှစ်သက်တယ်၊ ဒီဟာကိုငါတွေ့ပြီဒီနေ့ငါလုပ်မယ်လို့ငါထင်တယ် အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ။
မင်္ဂလာပါ thermomix မှအရည်ကိုပုလင်းထဲသို့ထည့်ပြီးပြီဆိုလျှင်ဘာကြောင့်ခြင်းတောင်းထဲသို့ထည့်ရန်လိုအပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်နားမလည်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါမင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကိုတကယ်ကြိုက်တယ်၊ ငါနေ့တိုင်းကြည့်ရှုတယ်။
မင်္ဂလာပါ Conchi, နှစ်ခု strainers ရှိသည်ဖို့, ဆိုလိုသည်မှာအကြွင်းအကျန်များသည်ဖန်တလုံးအတွင်းရှိခြင်းတောင်းထဲမှတဆင့်ဆက်လက်ကျန်ရှိနေပြီးစစ်ထုတ်ကိရိယာကဘာမှမကျဆင်းစေရန်နောက်ဆုံးစစ်ထုတ်ကိရိယာအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ကိုနှစ်သက်တဲ့အတွက်။
စန်ဒရာ iglesias ဟုသူကပြောသည်
sandra iglesias အားပြန်ပြောပါ
Sandra ဘယ်လောက်အရသာရှိတာကိုသင်မြင်ရလိမ့်မယ်။ မင်းကြိုက်မယ်လို့ငါထင်တယ်။
Ana Martin ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါအယ်လီနာ၊ ဒီဇင်ဘာ လမှစ၍ ကျွန်ုပ်သည် thermomix (ကျွန်ုပ်ခင်ပွန်းထံမှအံ့အားသင့်စေသည့်လက်ဆောင်) ရရှိခဲ့ပြီးကျွန်ုပ် ၀ မ်းသာမိပါသည်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကိုငါကြည့်ပြီးငါ့အတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်မခင်ပွန်းကဆီးချိုရောဂါဖြစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်သံသယအနည်းငယ်ရှိတယ် ငါဒီ isotonic အချိုရည်ကိုပြင်ဆင်တော့မယ်။ ဒါပေမဲ့သကြားအစားငါဒီမှာရောအခြားစာရွက်အတွက်ပါထည့်ထားတဲ့သကြားပမာဏဘယ်လောက်လဲဆိုတာသင်ငါ့ကိုအကြံပေးနိုင်မလား။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သင်၏ကြိုးပမ်းမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါအန်နာ၊ အကောင်းဆုံးကတော့သင်ချိုချိုဘူးကိုကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ Saccharin သကြားနှင့်သကြားတူသည်။ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုစီသည်မတူညီသောကြောင့်သူတို့၏ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ငါတို့နှင့်တွေ့ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ မင်းတို့ငါတို့ဘလော့ဂ်ကိုနှစ်သက်တဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်
မင်္ဂလာပါမိန်းကလေးများ၊ အမှန်တရားဟာအလွန်ကျန်းမာတဲ့သောက်စရာပါ ငါကအိမ်မှာမကြာခဏပြုလုပ်လေ့ရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်အားကစားသောက်စရာတစ်ခုသာမကဘဲပုံမှန်အချိုရည်အစားအစားတွေအစားအစာအဖြစ်ပါတဲ့။ ငါတို့အားလုံးကတကယ်ကိုကြိုက်တယ်၊ ငါကဆီးချိုရောဂါဖြစ်ပြီးချိုချိုစေတယ်။ ချမ်းသာခြင်း။ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
နူယာနာကြိုက်လို့ ၀ မ်းသာပါတယ်။ အမှန်မှာ၎င်းသည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအကောင်းဆုံးသောသောက်စရာဖြစ်သည်။ အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ။
Carai, ငါ့ထံသို့ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဘယ်တော့မှ !!
ငါ့သားဟူးကီကစားနေတယ်။ ငါသူ့ကိုအမြဲတမ်းဒီလိုသောက်စရာ ၀ ယ်ပေးတယ်။ ဂိမ်းအတွက်တော့ငါသူ့ကိုဝယ်မယ်။
ဟယ်လင်အယ်လီနာ၊ ငါလုပ်ချင်တယ်။ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာဘယ်လောက်ကြာကြာသိမ်းထားမလဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Alicia မင်္ဂလာပါ။ အမှန်တရားကတော့ကျွန်တော်တို့တစ်နေ့ပြီးအောင်လုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ ဒါပေမယ့်သုံးရက်လုံးလုံးတော့ဒီအတိုင်းအတာအထိထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ဗီတာမင်တွေကိုမဆုံးရှုံးစေဖို့သင်စားသကဲ့သို့စားလိုက်ရင်ပိုကောင်းတယ်။ မင်းငါ့ကိုကြိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်၊ မင်းငါ့ကိုပြောမယ်
ငါမှာမုန်လာဥနီနဲ့လီမွန်တွေရှိတယ်ဆိုတာမထင်ခဲ့ဘူး၊ ဒါကမူလငါးမွေးကန်ထက်အများကြီးပိုကောင်းတယ် !!
ငါမှာမေးခွန်းတစ်ခုရှိပေမယ့်စာရွက်အကြောင်းမဟုတ်; ဓာတ်ပုံအကြောင်းသင်မည်သို့ရေးသည်၊ မည်သည့်အစီအစဉ်ဖြင့်သင်မည်ကဲ့သို့ရေးသည်ကိုသိလိုပါသည်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်😀
Hello Meliade၊ ပရိုဂရမ်တွေအများကြီးရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ Photoshop (သို့) Picnic ကိုသုံးတယ်။
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်းများ၊ ကျွန်ုပ်အသက် ၃၇ နှစ်ရှိပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်များသောအားဖြင့်ပြေးလေ့ကျင့်လေ့ကျင့်သည်၊ လူကြိုက်များသောလူမျိုးများအတွက်ပင်စာရင်းသွင်းသည်။ ကျွန်ုပ်သည် thermomix သို့မဟုတ်စွမ်းရည်များစွာပါဝင်သောချက်ပြုတ်နည်းများရှိသောကြောင့် isotonic အချိုရည်များထည့်ရန်သင်ချင်ပါတယ်။ ငါဆက်ပြီးရေးပေးပါ ဦး ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ အန်တိုနီယို၊ အားကစားသောက်စရာအတွက်စာရွက်တစ်စောင်ရေးဖို့စောင့်နေတယ်။ ငါကြွယ်ဝသည်မျှော်လင့်ပါတယ်, ဒါလျှင်ငါစာရွက်ထားမည်။ သင့်ရဲ့အကြံပြုချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ကကောင်းတစ်စိတ်ကူးပါ။ အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကောင်းသောအကြံဥာဏ်များစွာပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သင်၏စာမျက်နှာကိုကျွန်တော်ကြိုက်နှစ်သက်။ နေ့စဉ်ကြည့်ရှုသည်။ နောက်တစ်နေ့တွင်စွမ်းအင်သောက်သုံးမှုသည်အဘယ်ကြောင့်ခါးသီးသောအကြောင်းဖြစ်သည်၊ ၎င်းကိုလတ်ဆတ်စွာမပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါရိုစီ၊ နောက်တစ်နေ့မှာလိမ္မော်သီးဖျော်ရည်နဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ခါးနာလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့တာယူရမည်။ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
fa ။ ဟုသူကပြောသည်
mmmm k ricaa! voi acer x 2ºအချိန်နှင့် xro ငါသံသယရှိသည်ကိုကလေးပုံတစ်ပုံအတွက်ဖြစ်သကဲ့သို့? ကျေးဇူးတင်ပါတယ် muxas
မင်္ဂလာပါ Stefa၊ ခင်ဗျားတို့ကို ၄ ပိုင်းခွဲရမယ်။ အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ။
ငါလုပ်ခဲ့ပြီးပြီ၊ ငါ့အိမ်မှာအောင်မြင်ခဲ့တယ်။ ငါသာအနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ခဲ့တယ်, ကောင်းသော Valencian အဖြစ် ... ငါရုပ်ရှင်ထဲကနေလိမ္မော်ရောင်နှင့်ဤတစ်ခုထည့်သွင်းပြီ! အာ ထိုအခါငါသည်လည်းတာဘိုနှင့်အတူအရာအားလုံးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ကြ! haha! စက်သည်အမြင့်ဆုံးသို့ရောက်သောအခါပုံမှန်ဖြစ်ရမည်။ hehe
ဟိုင်း Carmen၊ မင်းဒါကိုကြိုက်လို့ဝမ်းသာပါတယ်။ အမှန်တရားကတော့တာဘိုနဲ့အနည်းငယ် splash ဖြစ်ပေမယ့်ထိုက်တန်ပါတယ်။ လိမ္မော်ရောင်ထည့်ရန်အလွန်ကောင်းသော။ အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ။
မင်္ဂလာပါအယ်လီနာ၊ အရင်ကမဖြေကြားနိုင်လို့စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ အကယ်၍ ဒီတိုမိုတိုစ်အဖျော်ယမကာအမျိုးအစားများအတွက်သင်ချက်ပြုတ်နည်းများထပ်ထည့်မယ်ဆိုရင် ၀ မ်းသာပါလိမ့်မယ်၊ ကျေးဇူးတင်စကားနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်အယ်လီနာချောက်ချားသည်
ဟဲလို Antonio အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ။
မင်္ဂလာပါ၊ လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်သည်သင်၏ဘလော့ဂ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ပျော်ရွှင်မှုအတွက်သင်၏အတွေ့အကြုံ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုပေးသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်အားများစွာချီးကျူးပါသည်။ ယခုတနင်္ဂနွေအိမ်၌ဆရာ ၀ န်များက“ ဗိုင်းရပ်စ်” ဟုခေါ်သည့်အရာကိုဖမ်းမိပြီးကိုယ်ခန္ဓာသည်အခြားအရာတစ်ခုကိုမလိုချင်သောကြောင့်“ ရေကူးသောက်ခြင်း” (ကျွန်ုပ်၏ကလေးများသည်အစာမစားသော်လည်း၊ သူတို့ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။ သို့သော်သို့သော်၎င်းသည်အနည်းငယ်သာသိသောအောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးငါနောက်တစ်ခေါက်ထပ်လုပ်ရန်လိုသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီးတော့ ...
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Ana ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ။ မင်းကိုသဘောကျတဲ့အတွက်ငါအရမ်းဝမ်းသာတယ်၊ မမျှော်လင့်ဘဲရောက်လာတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကမင်းရဲ့အိမ်ကနေထွက်သွားပြီလို့ငါမျှော်လင့်တယ်။ အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ။
မင်္ဂလာပါအယ်လီနာ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာရေငံပုလင်းတစ်လုံးဖြစ်ဖို့သောက်ဖို့စာရွက်တစ်စောင်ပြောပြပေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အိုင်ရင်း Arcas ဟုသူကပြောသည်
ရေ 100 ဂရမ်
5 ရေခဲ Cube
သကြား 50 ဂရမ်
ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ခရမ်းချဉ်သီးတွေကိုလိမ္မော်ရောင်နဲ့လိမ္မော်သီးခွံတွေဖြန်းလိုက်တယ်။ ကျနော်တို့ရေနှင့်သကြားထည့်ပါ။ ၅ စက္ကန့်လျှင် ၅ မြန်ပြီး ၁၀ မှ ၁၀ သို့တဖြည်းဖြည်းတက်သွားသည်။ ၎င်းကိုအပြည့်အဝစွမ်းအားဖြင့်နှစ်မိနစ်ထားရှိသည်။
ငါတို့ရေခဲထည့်တယ်၊ vel ကိုမြှောက်တယ်။ ၅ မှာ ၅ စက္ကန့်ပိုင်းခြားပြီးသူတို့ကို ၁၀ ခုခွဲပြီးတော့နောက်ထပ် ၁၀ စက္ကန့်ပိုင်းမှာထပ်တိုး။
Irene Arcas သို့ပြန်သွားပါ
ကောင်းပြီ၊ ငါလုပ်ခဲ့တာတွေကိုသတိပြုမိတယ်၊ ငါ့သားကအားကစားသမားပါ၊ ငါတို့လုပ်မယ်၊ မင်းအကြောင်းပြောပြမယ်၊ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်က ၀ ယ်ခဲ့တယ်၊ ကောင်လေး၊ ငါ့သားတောင်မှအံ့သြသွားတယ်။ ငါ Greetings ကို ၀ ယ်လိုက်ပြီးအဖွဲ့ထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Ascen Jiménez ဟုသူကပြောသည်
ဒီခွက်ကိုသင်ကြိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် အာ ပြီးတော့မင်းရဲ့မှတ်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ပြည်ကြီးငါးနှင့်ပုစွန်နှင့်အတူ Soupy ဆန်